WAQTI INTEE LE'EG AYAAD KU KARSAARI KARTAA ADIGOO ADEEGSANAYA BOORSADA KU XIRAN TIIRARKA IYO SIDA LOO ISTICMAALO? - KHUDRADDA
Macaamilka hadda la jabiyay wuxuu leeyahay xulasho weyn oo firiley ah. Rugaha suuqyada iyo dukaamada waxaad ka heli kartaa waxkasta oo aad jeceshahay wadnahaaga: qoob-ka-soo-saarka heerarka kala duwan ee qaangaarka iyo dhammaan noocyada kala duwan, galleyda qasacadaysan iyo la kariyey, iyo sidoo kale alaabooyin badan oo laga sameeyay maadada.
Waqtiyada Soofiyeetiga ah, khudradan ayaa si xor ah u heli jirtay beeraha beeraha, iyo qof kasta oo doonaya inuu jabiyo naftiisa inta loo baahdo. Warshad waxtar leh ayaa si baaxad leh u koray beeraley iyo dadka degaanka xagaaga. Dhab ahaantii hooyooyinka iyo awowayaashood way ogyihiin sida loo karsado dhadhan fiican.
Kadibna waxay ku karsanayeen qadar aad u ballaadhan, dabaqyada, awoodda ay kudhintay qiyaastii toban litir. Cuntada lagu kariyo suxuunta aad jeceshahay, si taxadar leh u gudbinta jiilka ilaa jiil.
Dad tiro yar ayaa ogsoon in warshadani aan loo isticmaalin kaliya cunto karinta, laakiin sidoo kale daawo kale, halkaas oo qaybteeda dhirta iyo firileyda laga heli karo qaybo ka mid ah waxyaabo gaar ah oo ku jira guryaha bogsoodka ah ee kharashka daawooyinka iyo fuska.
Corn wuxuu si wanaagsan u saameeyaa xaaladda guud ee bini'aadamka, loo isticmaalo daaweynta cudurrada kala duwan, oo loo isticmaalo kareemka jirka iyo ka kooban:
fitamiinada - A, B, PP, E, H;
micro-iyo macro-iodine, calcium, potassium, manganese, copper, fosfooraska, zinc, birta;
Acids oo saameyn wanaagsan ku leh heerarka kolestaroolka.
Dhakhaatiirtu waxay ku talinayaan in ay nadiifiso jiritaanka ilmaha caloosha ee xad-dhaafka ah, isticmaal dadka waayeelka ah, si looga hortago atherosclerosis. Qaar ka mid ah spoonfulyada miraha maalin - waxay kordhin doonaan codka, xoojinta xididdada dhiigga wuxuu hagaajin doonaa hawsha wadnaha, kaadiheysta iyo xajmiga cuntada. Haddii ay dhacdo xaalad xumo ah dheefshiidka iyo cawaaqibkeeda, waxaa lagu talinayaa in la cuno 100 garaam oo ah miraha la kariyey.
Caawin Badeecadu waa mid qiimo badan u leh maaddada kiimikada iyo marka la barbar dhigo cayilka.
Waxay ka kooban yahiin borotiinka si sahlan oo dheecaan leh, si deg deg ah u cufan oo ka takhalusaya halista ah in la cuno, dardar-socodka dheef-shiid kiimikaad iyo dheef-shiid kiimikaadka, wuxuu magdhowaa yaraanta fitamiinada iyo macdanta, waxay hagaajisaa maqaarka maqaarka wuxuuna kor u qaadayaa iska caabinta walbahaarka.
Sida oo leh dhir kasta leh bogsashada guryaha - Waxaa jira qaar ka horjoogsanaya isticmaalka. Daryeelka waa in la qaataa:
Bukaanka qaba cudurrada daba-dheer ee habka dheef-shiidka.
Dadka qaba xinjirowga dhiigga oo kordhiya - sababtoo ah maadada sare ee fitamiin K, oo kicinaysa nidaamkan.
Iyada oo cayilka - sababtoo ah content heer-kulka calorie - 93kcal - halkii 100g.
Iyadoo loo eegayo dulqaad shakhsi ahaaneed iyo muujinta xasaasiyadda alerjiga.
Ha dhigin wakhtiga diyaarinta mudo dheer. Cylinders kala iibsiga kala duwan ee Bonduelle waa in si deg deg ah loo xalliyo by cabbirka isku mid ah, si ay isku midka ah alxanka, nadiifinta wasakh, wasakh waxyeelo iyo qaybo madow ee stigmas. Timaha haray iyo dhalinyarada, cagaarka cusub ayaa siin doona fayradda nadiifka ah iyo karisashada.
Daaweynta ka dib, raaci si fiican biyo. Madaxyo badan oo waaweyn oo kaabash ah ayaa la gooyn karaa tirada qaybaha loo baahan yahay, siinta meeleyn ku habboon oo karti leh.
Sidee u saxdaa?
Lovers of dhadhan dahabka, waxaad u baahan tahay inaad raacdo xeerarka qaar ka mid ah si loo ilaaliyo jilicsanaanta, juiciness, iyo in aan lumin maaddooyinka faa'iido jirka jirka aadanaha (waxaad ka ogaan doontaa sida loo sameeyo miro jilicsan iyo casiir, halkan). Waxaa jira laba sahlan, oo ka soo jeeda qaybta "macaan".
Geedi socodka oo dhaq dhaqidda khudradda, ka nadiifinta cagaarka waxyeello leh iyo timo madow.
Ku rid, haddii ay suurtagal tahay, dhererka dhererka badan.
Shub 5cm oo biyo ah oo qabow ka sarreeya heerka dhegta sare.
Dabool dabool kaddibna isku kari ilaa 15-20 daqiiqo ilaa diyaar.
Waa muhiim! Muddada geedi socodku waxay had iyo jeer ku xiran tahay qaangaadhka firileyda. Haddii aysan aheyn mid aad u bislaaday, markaa waa inaadan dheefin.
Daryeelka kuleylka ah ee muddada dheer iyo kan weynba, waa in la daaweeyaa. Mararka ficilku wuxuu ku fidaa 30-40 daqiiqo ama ka badan (sida ugu dhakhsaha badan ee loo kariyo hadhuudhka, waxaad ka heli kartaa halkan).
Geedi socodka oo dhaq dhirta. Saar cagaar ah oo cusub oo cagaaran.
Ku dhaji hoose iyo dhinacyada digsiga iyadoo la diyaariyey, caleemo nadiif ah.
Ku rid khudaarta si aanay u taaban darbiyada.
Ku dabool xaashida haray oo buuxi biyo qabow.
Ku kari sida kiiska ugu horreeya.
Diyaarinta alaabta, oo leh qaab kasta oo diyaargarowgeeda, waxaa lagu hubiyaa fargeeto: haddii miraha si fudud loo duuduubay ama la calalin - saxanka waa diyaar. Waa in la xusuusnaado in sifooyinka siriyaalka ay adag tahay ka dib marka la qaboojiyo, markaa waa in loo adeegaa xaalad kulul.
Corn of bisilaad hore waxaa la kariyey 15-20 daqiiqo. Cunista gaboobay ama ka weyn, mararka qaarkood waxay qaadataa nus saac ama ka badan. Da'da miraha si fudud ayaa loo go'aamiyaa midabka - midabkiisa iyo iftiinka midabka, da'da ay yihiin.
Saliidku waa in isla markiiba la isticmaalo, haddii kale inta lagu jiro karinta cusbadu waxay ka soo bixi doontaa dhammaan qoyaanka, miraha waxay noqon doonaan kuwo adag.
Miiraha si habboon loo kariyey waa jilicsan, casiir leh, oo aan dhadhanayn. Akhri alaabtayada aad ka baran doonto sida loo kariyo hadhuudh aan dhagaha la saarin iyo khudradda yaryar oo dhan, waxaad kaloo baran doontaa cuntooyinka aan caadi ahayn iyo siyaabaha lagu kaydiyo alaabta la dhammeeyey.
Daawee oo dhaq dhirta, sida la rabo, ka tag caleemo jilicsan iyo stigmas iyada oo aan waxyeello.
Ku qooji biyo qabow muddo dheer - haddii cobsgu jir yahay. Haddii dhalinyaro, waa inaadan sidaa samayn.
Golaha Si aad u samayso jilicsanaanta jilicsan iyo hindisada, ku dhaaf biyo, iyadoo daboolka xiran 15 illaa 20 daqiiqo, kaddib marka la kariyo.
Ka soo bax biyaha iyo, haddii saxanka loo diyaariyey qolofta khudradda, markaa waa inaad ka takhalustaa.
Waxaad arki kartaa cuntooyinka ugu wanaagsan ee lagu kariyo hadhuudh la kariyey oo ku saabsan digaagga buuggan.
Sidee loo kariyaa cusbo?
Waqti intee le'eg ayaad u karisaa iyo sida loo Bonduelle ugu dhexjirto maqaarka?
Geedi socodka oo dhaq dhaqaajinta dhallinyarada, cobs cusub, ka baxaya cagaar, caleemaha si joogto ah.
Karkari biyaha cusbada leh ee weelka wax lagu kariyo. Saliid ay u dhadhamiyaan, heerka of 1 tbsp. 3 litir oo biyo ah.
Ku rid kabarrada biyo karkaraya, dabool daboolka, dabka ka dhig oo ku kari ilaa 15-20 daqiiqo.
Ka dib karinta, daadi biyaha.
Ku duub digsi kulul leh cobs leh shukumaan raaxo ah si aad uhesho diirimaad oo aad u hesho dhadhan dheeraad ah.
Ka hor inta adeegaya, caleemaha waa in la soo qaato, khudradda xoqin cusbo.
Haddii hadhuudhku uu yar yahay, markaa way sahlan tahay, sidaas awgeed waa inaad xusuusataa waqtiga iyo si adag u hoggaansamida nidaamka la soo jeediyay (wixii faahfaahin ah ee ku saabsan sida iyo inta la kariyo hadhuudhka dhalinyarada ah ee rugta digsiga, halkan ka akhriso). Haddii la kariyo ka badan intii loo baahdo, markaa waxay noqon doontaa mid adag oo aan ladnayn. Dhuxulada waa in si buuxda loogu qulqulaa biyaha, taniyo kuwa ugu sarreeya sida caadiga ah. Sidaa darteed, waxay u baahanyihiin in ay marmarka qaarkood u jeestaan ​​si ay si kedis ah u karkaraan.
Waqtiga la kariyo ee wax lagu karsado waxaa had iyo jeer laga go'aamiyaa marinka biyaha karkaraya.
Baro in aad milixdo hadhuudhka marka aad karisid, iyo sidoo kale u eeg cuntooyinka tallaabo tallaabo ah ee lagu kariyo siriyalka buuggan leh ee cusbada, halkan.
Mawduucyada aan la goyn karin si badbaado leh ayaa loo cusbayn karaa geeddi-socodka, iyada oo si taxadar leh loo ilaaliyo wakhtiga karinta. Laakiin, haddii ay lagama maarmaan noqoto in la gooyo geedi socodka, markaa waa inaadan cusbo ku darin.
Karkari oo aan milix lahayn, sababtoo ah cusbadu waxay keenaysaa fuuq-baxa badeecada iyo lumitaanka muuqaalkeeda. Hadal goosasho waa in la saliido isla markiiba kahor intaan la isticmaalin. Haddii la rabo, marka la adeegsanayo, la dhalaaliyay ama la qaboojiyay subagga ayaa la isticmaali karaa. Dhammaan arrintani waa arrin dhadhan iyo rabitaan shakhsiyeed.
Waa muhiim! Miro-dhir ama dhir udgoon oo si wanaagsan u bislaaday waa in aan lagu dhexdhigin biyo cusbayn. Natiijo ahaan, waxay noqon doonaan kuwo adag oo casiir leh.
Wanaajinta guryaha ee decoction
Decoction ah ee cobs hadhuudh ah ee bisil-caano-miro ama wax-loo yaqaan "noocyo cad", la wada karkariyo leh waraaqaha iyo stigmas, qaado 1-2 koob oo 3 jeer maalintii.
In lagu daaweeyo cudurrada beeryarada, cudurada dheef-shiid kiimikaad, xanuunka dareenka, maskaxda, suuxdinta.
Waxay leedahay waxyaabo ka hortagga gabowga, sidaas darteed waxaa lagula talinayaa dadka waayeelka ah, sida hab looga hortago gabowga.
Iyada oo leh dhadhan fiican, caafimaad iyo nafaqo leh oo ah hadhuudh, sida saxan madaxbannaan, hantidiisa dawooyinka waa mid aad u qiimo badan oo aan la goyn karin. Ma aha oo kaliya dhadhan fiican, laakiin sidoo kale saxan aad u caafimaad leh. Haddii aad si joogto ah u isticmaasho, si dhaqso ah ayaad u wanaajin kartaa xaaladda jidhka, adigoo eegaya qiyaasta. Haddii aad qabtid cuduro, la tasho dhakhtarkaaga.